ब्लग कारखाना, आपूर्तिकर्ता - चीन ब्लग निर्माता
6.18 लागि लड्न, चिनियाँ मिड-वर्ष तातो बिक्री दिन!
19-06-14 मा व्यवस्थापक द्वारा
6.18 मिड-वर्ष चिनियाँ तातो बिक्री दिन छ! अब हामी सबै नजिकै 6.18 समर्थन गर्न मई को अन्त देखि उत्पादन व्यस्त छन्। हामी एक अद्भुत बिक्री राजस्व सक्छ चाहनुहुन्छ। * ACCO टेक लगातार उच्च गुणवत्ता संग पढेर कलम, प्रारम्भिक शैक्षिक खेलौना, आदि उत्पादन गर्न प्रयासरत।